Gawaarida Model Model, Baabuurta Model Model, Baabuurka Model Model - Saddex Stone
Gawaarida 'Diecast Truck' iyo Cagaf cagaf leh 'Trailer Model'
Baabuur caag ah
Gawaarida Model Model
Porsche 911, oo markii hore loo yaqaanay 901, ayaa la soo saaray 1967 waxaana lagu heli karaa qaabab badan oo jidh ah, oo ay ku jiraan noocyada Targa. Targa waxaa lagu iibsan karaa xulashada afar matoor, oo soo saaraya inta udhaxeysa 130 iyo 160 hooras sida moodooyinka kale ee lagu soo daray taxanaha 1967.
Qaabkani wuxuu la yimid saqaf laga saari karo iyo shaashad gadaal oo jilicsan.
Himiladayada: Gaariga dhabta ah wuxuu ku dhashay qaabka darteed.
Himiladayada: Macaamiisha ha sii wadaan inay na ammaanaan.
Ruuxeena: U ogolow shaqaaluhu inay sii shaqeeyaan iyagoo faraxsan.
Falsafadeena: Had iyo jeer waxaa jira WIN-WIN zone mana jiraan wax ganacsi ah oo laga wada hadli karo.
Dib u eeg sawirada gawaarida caadiga ah (gawaarida caadiga ah) qadarinta moodada gawaarida
Gawaarida hore, sidoo kale loo yaqaan gawaarida caadiga ah, guud ahaan waxaa loola jeedaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka ama gawaaridii hore. Gaarigii hore waa wax soo saarka nostalgia. Waa gaari ay dadku isticmaali jireen waagii hore welina ay shaqeyn karaan. Magaca Ingiriisiga waa baabuur guris. 0312 shabakada moodeelku waxay leedahay maqaallo badan oo ku saabsan sawirradii hore ...
Tiknoolajiyada mustaqbalka waa aragti muuqaal ah: Caqli-galnimada carruurta ayaa lagu dhawaaqay "dib ugu noqoshada mustaqbalka 2 ″ maglev DeLorean time car
Maanta waa maalin caadi u ah dad badan, laakiin waxay u tahay maalin muhiim u ah taageerayaasha filimka caadiga ah “dib ugu laabo mustaqbalka 2 ″. Maanta waa maalintii Marty iyo Dr. Brown, halyeeyada sheekada, ay mustaqbalka ku laaban doonaan. Si loo xuso maalintan, alaabooyin badan oo durugsan oo la xiriira ...
Cinwaanka: Qolka 201, No.5 Weige Road, Magaalada Shipai, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong